Aprilia Scarabeo 50 vs 100 ဆန်းစစ်ခြင်း 1 ဆိုင်ကယ် Mopeds | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
နေအိမ် → Aprilia → Aprilia Scarabeo 50 vs 100 ဆန်းစစ်ခြင်း 1 ဆိုင်ကယ် Mopeds
19 ဇွန် 2015 | စာရေးသူ: dima | ဟာ Off comments အပေါ် Aprilia Scarabeo 50 vs 100 ဆန်းစစ်ခြင်း 1 ဆိုင်ကယ် Mopeds
Aprilia Scarabeo 50 vs 100 ဆန်းစစ်ခြင်း 1
The 2-cylinder theme is unaltered in all three editions, အဆိုပါ 50 လမ်း, အဆိုပါ 50 4T က, as well as the 100 4T က. The Scarabeo 50 လမ်း, the leading seller in Italy, will be the go-to model of the grand Scarabeo family members. It will be the most youthful withaminimalist style and alsoaamazing 2T engine.
အင်ဂျင်ကို: Horizontal single cylinder four stroke. Overhead cam. Forced air cooling. Catalytic exhaust.
Bore and stroke: 50 x က 49 မီလီမီတာ (39.0 x က 41.8 မီလီမီတာ).
Fuel system: Dell’Orto carburettor, Ø 22 မီလီမီတာ (Keihin Ø 20 မီလီမီတာ).
Aprilia Mana X ကို – Concept Motorcycle performance picture comparison news
Aprilia Scarabeo 50 လမ်း
Ducati Diavel Aprilia Mana 850 Brammo Enertia ဆူဇူကီး Colleda CO ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် ဆူဇူကီး AN 650 Bajaj Discover စမတ် eScooter ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic ဟွန်ဒါ DN-01 Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် Moto Guzzi 1000 Daytona Injection ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 Ducati 60 KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို Ducati Desmosedici GP11 သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto စက်ဘီး Kawasaki ER-6n